माओवादीको पहिलो सरकारको कार्यक्रम दोहोरियो, हरेक स्थानीय तहमा सहुलियत पसल ! « GDP Nepal
काठमाडौं । सरकारले माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारको कार्यक्रम दोहोर्याएको छ ।
२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको सुपथ मूल्य पसलको कार्यक्रम यो सरकारले पुनः ल्याएको छ । उक्त समयमा असफल सावित भैसकेको यो कार्यक्रम चुनावी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समावेश गरेका हुन् ।
त्यसबेला प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा यस्तो सुपथ मूल्य पसल स्थापन गरिएको थियो ।
बजेटटमा उल्लेख भएअनुसार न्यून आय भएका गरिब परिवारका लागि सहुलियत पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवार पहिचान गरी खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । थोरै आय भएका परिवारहरूलाई परिचयपत्रको आधारमा सहुलियतदरमा सामग्री उपलब्ध गराउनेसमेत अर्थमन्त्री शर्माले बताएका हुन् ।